Wararka | RayHaber | raillynews
Istikbal wuxuu ku jiraa cirka!
Go'aanka Golaha Guud, magaca Ururka waxaa loo beddelay “Turkish Aeronautical Association” (THK). Kani maahan dhawr ereyo fiican oo lagu sheegay xamaasada sannadihii, sidoo kale waxaa la hor dhigay Jamhuuriyadda Turkiga [More ...]
Maanta Taariikhda: 29 May 2006 TÜVASAŞ, Railroad Railroads
Maanta oo kale 29ka Maajo 1899 Maareeyaha Guud ee Tareenka Anadolu Kurt Zander wuxuu ka dalbaday Babıâli heshiiskii tareenka in laga dhigo Konya ilaa Baghdad iyo Khaliijka Beershiya. 29 Meey 1910 Shirkadda Tareenka Bariga, Ottoman Anonymous [More ...]
Waxkasta oo ku saabsan Mashruuca Ankara Sivas YHT: Ankara (Kayaş) Kırıkkale Yozgat Sivas khadka Tareenka Xawaaraha Sare oo dhererkiisu yahay 393 km waxaa loo qorsheeyay 2007-2019 sida biloowga iyo taariikhda dhammaadkeeda. Yerkoy [More ...]
Daqiiqada ugu dambeysa: Waxaa jiri doona bandow 15 Magaalooyin ah maalmaha Sabtida iyo Axada: Faahfaahinta bandoowga la dhaqan gelin doono Sabtida iyo Axada, Meey 14-30, 31 Wasaaradda Arimaha Gudaha, 2020 Magaalooyinka waaweyn iyo Zonguldak. [More ...]
Waxaa loo arkaa inaysan dadku heli karin fursado ku filan noloshooda bulshada si ay ula sheekeystaan ​​oo ula kulmaan dad cusub maalinta. Xaaladda noocaas ah, waxay ka faa'iideysan karaan adeegyada bilaashka ah ee leh qolalka sheekada halkaasoo ay ka heli karaan natiijooyinka ugu caafimaad badan. [More ...]
Markay ciyaartoy metin2 pvp raadsadaan metin2 pvp server, inbadan oo kamid ah kulamada ay la kulmaan waxay noqdaan adeegayaal xir xiran. Sababta taa loo leeyahay ayaa ah in inta badan cayaaraha lagu furay laguna xayeysiinayo baraha xayeysiinta lagu muujiyo xamaasad muddo gaaban. [More ...]
Muddada Shaqo barasho ee khadka tooska ah ayaa bilaabatay: Waxay ahayd mid xiisa u leh laylisyada shaqada xagaaga ee loogu talagalay inta badan goobaha shaqada ee ka beddelay guriga una beddelaan qaab shaqo oo ka dillaacay coronavirus. Mawduucan oo lagu qiimeynayo Koc Group, oo ah siyaasad ka jirta dalka Turkiga [More ...]
Daqiiqadii ugu dambeysay: Qaar ka mid ah Tallaabooyinka Coronary ayaa laga Saaray: Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan wuxuu sameeyay bayaan muhiim ah ka dib shirkii golaha wasiirada. Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan waxaa lagu ogeysiinayaa go’aamada cusub ee la soo saaray ee la xiriira dillaaca coronavirus. [More ...]
Isagoo bayaan siinaya ka dib shirkii golaha, Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan wuxuu sameeyey bayaanno muhiim ah oo ku saabsan xayiraadda lagu dabaqay muwaaddiniinteenna aad loo sugayey ee ka weyn 65 sano. Sharraxaaddaani waa sida soo socota: Waqti dheer sida ay qeexday Wasaaradda Caafimaadka. [More ...]
Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan, oo hadal ka dib kulanka golaha wasiirrada ka hadlay, ayaa sheegay in tallaabooyinka laga qaaday Coranavirus dib loo qiimeeyay qaarna xaddidaadda la qaaday. Waxa ugu muhiimsan ee xannibaadahaan ayaa ah xaddidaadda safarka isku-xirnaanta ah 1 Juun 2020 [More ...]
Shirkadda loo yaqaan 'Mars logistics' waxaa ka mid ah sameynta safka ugu horeeya ee tareenka Marmaray 15ka May dalka Turkiga. Iyadoo Marmaray, tareenka ugu horreeya ee dhoofinta wuxuu gaadhay Duisburg, Germany. Iyada oo 19 gaari iyo 34 weel [More ...]
Wasiirka Gaashaandhigga Qaranka Hulusi Akar ayaa ku dhawaaqay in yeedhiska iyo hoos-u-dhigista ay bilaabmi doonto 31-ka May. Sida ku xusan qoraalka ay soo saartay Wasaaradda, iyadoo uu hogaaminayo Wasiirka Gaashaandhigga Qaranka Akar, Taliyaha Guud ee Ciidamada General Yaar Güler, Taliyaha Guud ee Ciidamada Xoogga Dalka. [More ...]
Gegada Diyaaradaha ee Istanbul, oo ah HUB caalami ah sanadkiisii ​​ugu horreeyay oo leh qaab-dhismeedkeeda u gaarka ah, kaabayaasha adag, tikniyoolajiyadda sare iyo waayo-aragnimada safarka heerka sare ah, waxay ku dartay mid cusub natiijooyinkeeda waxayna leedahay “LEED Dahab”. [More ...]
LCT Show International, ayaa sanadkan lagu qabtay Las Vegas, USA iyada oo ay ku egtahay Gawaarida Ganacsi ee Bursa, Waxqabadka Jirka, Superstructure iyo Shirkadaha Soo Saarida UR-GE, oo aysoo bandhigtay Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Bursa (BTSO) [More ...]
Darawalka IETT Ahmet Köse, oo lagu daweeyay cudurka Covid 19, ayaa xaq u leh howlgab inta uu kasoo kabanayo. Hawshan, Ahmet Köse, oo codsi u keenay machadka, wuxuu ka helay xiisaha dhow ee saraakiisha IETT inta daaweyntu socoto. [More ...]
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha dhaqaalaha Adil Karaismailoğlu, oo leh qaabkiisa kuraasta dhifka ah, wuxuu u adeegi doonaa 411 rakaab ah nooca nooca CAF oo leh awood dhan 185 rakaab ah iyo 483 rakaab ah nooca noociisu yahay Siemens oo leh 213 awoodeed. Tareenadeena oo leh 50 boqolkiiba awood [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Ordu waxay soo faragelisay shilka ka dhacay wadada wicitaanka ee kale ee magaalada. Shaqada waxaa lagu samayn doonaa dhul 8 mitir ah si hoos loogu dhajiyo isha biyaha ee laga sameeyay inehit Birol Yıldırım Boulevard. Beddelka [More ...]
Dawladda Hoose ee Magaalada Ankara waxay sii waday shaqada rafcaan ee bandawga 4-ta maalmood ee lagu dhawaaqay inta lagu gudajiray bisha Ramadaan iyo jaawalka dagaalka ka dhanka ah dillaaca coronavirus. Min Mamak ilaa Polatlı, Sincan ilaa Elmadağ [More ...]
Duqa Magaalada Ankara Mansur Yavaş ee ku saleysan mashruuca ee ah 750 milyan oo TL oo loogu talagalay İstasyon Caddesi mashruucyada wadooyinka iyo buundada isku xirka ee Golaha Magaalada waxaa diidey Guddiga Qorsheynta iyo Miisaaniyadda, [More ...]
TransportationPark, mid kamid ah kuxirnaasha Dowlada Hoose ee Magaalada Kocaeli, wuxuu shaaciyay in Khadka 200 la cusbooneysiiyay saacadihii bixitaanka. TransportationPark waxay cusbooneysiisaa 30kii daqiiqoba mar si loo casriyeeyo rakaabka inta lagu gudajiro nidaamka sharciyeynta si ay rakaabku si raaxo leh ugu safri karaan. [More ...]
Isaga oo ka hadlaya safarada ay ku jiraan marabaxadaha ee loo yaqaan "NYT" oo bilawday ka dib nabaad-guur awgood laakiin kuma joogsan Izmit, ku xigeenka AK Party Kocaeli İlyas Şeker ayaa yidhi, "Tani waa uun bilow. Tareenka ayaa joogsan doona Kocaeli kadib marka la arko. [More ...]
Guddoomiyaha Sivas Salih Ayhan wuxuu baarey shaqooyinka socda ee Wadada Xawaaraha Sare (YHT) Eşmebaşı Tunnel. Guddoomiye Ayhan iyo dadkii la socday waxay sidoo kale u hambalyeeyeen shaqaalaha si hufan u shaqeeyay intii lagu jiray fasaxa. Khadka Ankara-Sivas YHT [More ...]
Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Sivas (STSO) Mustafa Mustafa, gudoomiyahii ugu horreeyay ee Turkiga S / H Nidaamka Bayraktar tb2'n naqshadeeyaha agaasinka farsamada rookayaasha (CTO) iyo T3 Mu'asasada Guddoomiyaha Guddiga Trustee. [More ...]
muhiim u ah la dagaallanka cudurka coronavirus ee ka soo kateden Turkiga, wuxuu hirgalin doonaa seddex qorshe oo aad muhiim u ah isku-habeeynta ka dib bisha Juun. Iyada oo la filayo in la qaado xayiraadda safarka, shirkadaha basaska ayaa dhammaystiraya diyaarintooda ugu dambeeya. Wakiilada warshadaha, tareenka [More ...]
Tallaabada koowaad ee Nidaamka Caadiga ah ee Samsun! Duulimaadyada Tram oo sii kordhaya; Dhismaha Mashruuca Dib-u-dhiska Mashruuca Samsun Yat. Heesta. ve Tic. Inc (SAMULAŞ) waxay ku dhawaaqday in adeegyada taraamyada lagu kordhin doono Samsun. Sida lagu sheegay bayaanka, taraamka, Kuliyadaha Adeegyada Daaweynta-Daaweynta [More ...]
1 2 ... 2.723 »